” အနုပညာ အလုပ်တွေ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ရွှေအိမ်စည် …. – Let Pan Daily
ပရိသတ်ကြီးရေ ပုရိသအမျိုးသားတွေပါမက အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်တွေပါသဲသဲလှုပ်ချစ်ရတဲ့ ခပ်ချေချေ မော်ဒယ်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ ချိုလွင်လွင်အပြုံးတို့က သူမရဲ့ အားသာချက် အလှအပတွေဖြစ်ပါတယ်။အမြဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေထိုင်တတ်မှု ပြဿနာတွေကို စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ပညာသားပါပါဖြေရှင်းတတ်သူ အဖြစ်မှတ်ချက် ပေးခံရသူလေးပါ။
Miss World Myanmar (2016 )ကနေ အနုပညာခြေလှမ်းစတင်ခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ Miss Grand Myanmar (2017)ရဲ့ သရဖူရှင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထပ်မံ ပြီး Miss Golden Land Myanmar (2018 )ကိုထပ်မံဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ ပိုလန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ Miss Supranational (2018) ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူပါနော်။
ဒီနေ့မှာတော့ သူမအနေနဲ့ ရိုက်ကူးမှုတွေပြန်လုပ်နေကြောင်း ရူတင်ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်လေးတွေကို သူမရဲ့ My day မှာဝေမျှဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ရူတင်ရိုက်ကူးမှုတွေပျော်ရွှင်စွာပြုလုပ်နေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်လေးကိုချစ်ရင် မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦး … ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ….
” အနုပညာ အလုပျတှေ ပွနျလညျလုပျကိုငျနပွေီ ဖွဈကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ရှအေိမျစညျ ….
ပရိသတျကွီးရေ ပုရိသအမြိုးသားတှပေါမက အမြိုးသမီးပရိတျသတျတှပေါသဲသဲလှုပျခဈြရတဲ့ ခပျခခြေေ မျောဒယျမလေးတဈယောကျဖွဈပွီးစှဲမကျဖှယျ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားနဲ့ ခြိုလှငျလှငျအပွုံးတို့က သူမရဲ့ အားသာခကျြ အလှအပတှဖွေဈပါတယျ။အမွဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနထေိုငျတတျမှု ပွဿနာတှကေို စိတျရှငျးရှငျးနဲ့ ပညာသားပါပါဖွရှေငျးတတျသူ အဖွဈမှတျခကျြ ပေးခံရသူလေးပါ။
Miss World Myanmar (2016 )ကနေ အနုပညာခွလှေမျးစတငျခဲ့တဲ့ ရှအေိမျစညျကတော့ Miss Grand Myanmar (2017)ရဲ့ သရဖူရှငျဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ ထပျမံ ပွီး Miss Golden Land Myanmar (2018 )ကိုထပျမံဆှတျခူးခဲ့ပွီး မွနျမာပွညျရဲ့ ကိုယျစားပွုအနနေဲ့ ပိုလနျနိုငျငံမှာ ကငျြးပတဲ့ Miss Supranational (2018) ကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့သူပါနျော။
ဒီနမှေ့ာတော့ သူမအနနေဲ့ ရိုကျကူးမှုတှပွေနျလုပျနကွေောငျး ရူတငျရိုကျကှငျးပုံရိပျလေးတှကေို သူမရဲ့ My day မှာဝမြှေဖျောပွခဲ့တာပါ။ ရူတငျရိုကျကူးမှုတှပြေျောရှငျစှာပွုလုပျနတေဲ့ ရှအေိမျစညျလေးကိုခဈြရငျ မှတျခကျြတဈခုခုပေးခဲ့ပါဦး … ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျဖှယျ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော ….
ခကျခဲနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ နစေ့ဉျ နတေို့ငျး ထမငျးဟငျးတှေ အပငျပနျးခံခကျြပွုတျပွီး ကြှေးမှေး လှူဒါနျးနတေဲ့ စူးရှထကျ
မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ခေါင်းလျှော်ပြီး စဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အလွဲလေးတွေကို အရွှန်းဖောက် ကာ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ပန်ကိတ်
ချစ်သူ နဲ့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ပရဟိတ အလုပ်တွေ လုပ်ချင်တယ် လို့ ဆိုလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ရငျသှေးလေး လှယျထားရတဲ့ ခဈြသူလေးနဲ့ အတူ ပြျောရှငျ ကွညျနူးစှာ Pre-Wedding စတငျ ရိုကျကူးနပွေီ ဖွဈတဲ့ စညျဖွိုး